I Morutsha dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland Delta any Botsoana. Ny isam-poniny dia 61. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Morwa dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgatleng any Botsoana. Ny isam-poniny dia 3 566. Ny laharam-pokontaniny dia 4. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Morwamosu dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 696. Ny laharam-pokontaniny dia 14. Ny laharam-pehintaniny dia -24.07942 ary ny laharan-jarahasiny dia 23.069224.
I Mosetse dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Tutume any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 787. Ny laharam-pokontaniny dia 15. Ny laharam-pehintaniny dia -20.650565 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.650818.
I Moshaneng dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 512. Ny laharam-pokontaniny dia 12. Ny laharam-pehintaniny dia -24.908075 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.238558.
I Moshaweng dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 222. Ny laharam-pokontaniny dia 37. Ny laharam-pehintaniny dia -24.178919 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.48864.
I Moshopha dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 373. Ny laharam-pokontaniny dia 16. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Moshupa dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse any Botsoana. Ny isam-poniny dia 20 016. Ny laharam-pokontaniny dia 108. Ny laharam-pehintaniny dia -24.771801 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.421561.
I Mosojane dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 210. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -20.622778 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.519274.
I Mosolotshane dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 017. Ny laharam-pokontaniny dia 21. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mosu dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Boteti any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 792. Ny laharam-pokontaniny dia 33. Ny laharam-pehintaniny dia -21.211953 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.022005.
I Mosweu dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 397. Ny laharam-pokontaniny dia 2. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Motlhabaneng dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Bobonong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 456. Ny laharam-pokontaniny dia 3. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Motokwe dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 413. Ny laharam-pokontaniny dia 20. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Motopi dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Boteti any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 340. Ny laharam-pokontaniny dia 3. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Motsentshe dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 400. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -25.371817 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.331624.
I Motshegaletau dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 958. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mowana dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 481. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Muchinje/Mabele dia tanàna iray ao aminny distrikani Chobe any Botsoana. Ny isam-poniny dia 773. Ny laharam-pokontaniny dia 6. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mulambakwena dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 974. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -20.571361 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.460415.
I Musi dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 296. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Nata dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Tutume any Botsoana. Ny isam-poniny dia 6 714. Ny laharam-pokontaniny dia 36. Ny laharam-pehintaniny dia -20.216667 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.183333.
I Natale dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Tutume any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 288. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia -21.102742 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.225612.
I Ncaang dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgalagadi North any Botsoana. Ny isam-poniny dia 228. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Ncojane dia tanàna iray ao aminny distrikani Ghanzi any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 958. Ny laharam-pokontaniny dia 37. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I New Xade dia tanàna iray ao aminny distrikani Ghanzi any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 269. Ny laharam-pokontaniny dia 6. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I New Xanagas dia tanàna iray ao aminny distrikani Ghanzi any Botsoana. Ny isam-poniny dia 777. Ny laharam-pokontaniny dia 27. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Ngarange dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 988. Ny laharam-pokontaniny dia 8. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Ngwapa dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 487. Ny laharam-pokontaniny dia 2. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Ngware dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 919. Ny laharam-pokontaniny dia 32. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Ngwatle dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgalagadi North any Botsoana. Ny isam-poniny dia 271. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Ngwatsau dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 393. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia -25.545501 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.527942.
I Nkange dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Tutume any Botsoana. Ny isam-poniny dia 3 550. Ny laharam-pokontaniny dia 10. Ny laharam-pehintaniny dia -20.298881 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.135593.
I Nlakhwane dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 583. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Nokaneng dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 067. Ny laharam-pokontaniny dia 26. Ny laharam-pehintaniny dia -19.666667 ary ny laharan-jarahasiny dia 22.266667.
I Nshakashokwe dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Tutume any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 168. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia -20.789666 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.18422.
I Nswazwi dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Tutume any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 185. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia -20.657957 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.231336.
I Ntlhantlhe dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 342. Ny laharam-pokontaniny dia 9. Ny laharam-pehintaniny dia -24.963174 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.593975.
I Nxamasere dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 584. Ny laharam-pokontaniny dia 3. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Nxaunxau dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 400. Ny laharam-pokontaniny dia 20. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Oliphants Drift dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgatleng any Botsoana. Ny isam-poniny dia 925. Ny laharam-pokontaniny dia 20. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Omaweneno dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgalagadi South any Botsoana. Ny isam-poniny dia 917. Ny laharam-pokontaniny dia 11. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Oodi dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgatleng any Botsoana. Ny isam-poniny dia 5 687. Ny laharam-pokontaniny dia 4. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Otse dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 787. Ny laharam-pokontaniny dia 27. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Paje dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 507. Ny laharam-pokontaniny dia 23. Ny laharam-pehintaniny dia -22.265337 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.791846.
I Palapye dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 37 256. Ny laharam-pokontaniny dia 37. Ny laharam-pehintaniny dia -22.546048 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.12507.
I Palla Road/Dinokwe dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 229. Ny laharam-pokontaniny dia 10. Ny laharam-pehintaniny dia -23.427098 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.682349.
I Pandamatenga dia tanàna iray ao aminny distrikani Chobe any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 798. Ny laharam-pokontaniny dia 4. Ny laharam-pehintaniny dia -18.266667 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.65.
I Papatlo dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 511. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -25.646744 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.502974.
I Parakarungu dia tanàna iray ao aminny distrikani Chobe any Botsoana. Ny isam-poniny dia 845. Ny laharam-pokontaniny dia 5. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.